देश/ विदेशको समाचारः एचकेनेपाल डट कम » 2008 » April
सर्लाही ६ मा पुनः मतदानपछि मतगणना सुरु
एचकेनेपाल डट कम काठमाडौँ प्रतिनिधि-
संविधानसभा निर्वाचनअर्न्तर्गत र्सलाहीको क्षेत्र नं. ६ का १३ मतदान केन्द्रमा हिजो पुनः भएको मतदान शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपछि आज बिहानदेखि मतगणना सुरु भएको छ। Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
गोली र बम बिष्फोट गराई मतदातालाई आतङ्कित पारिएको तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार शम्भुप्रसाद सिंहलाई मतदानकै दिन गोली हानी हत्या गरिएको कारण निर्वाचन आयोगले क्षेत्र नं. ६ का १३ मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरेको थियो। गत चैत २८ गते भएको निर्वाचन रद्द गरिएका गढैया गाविसका ५, बलरा एवं मिर्जापुर गाविसका ३/३ र अर्नाहा गाविसका दुई मतदान केन्द्रमा हिजो पुनः मतदान भएको हो।
त्यहाँ साठी प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।